Author: Gardabar Akinohn
Xay guduudan la moodyow. Isna waa shiddiyo hoog Nimanyahow dembow lama hadlo Mawdku ka adeegi Leave a Sayidkz Cancel reply Your email address will not be published. Ugu Dambeyn Sayidka Maxamed geeridiisa waxaa laga joogaa 95 sano, dadkii uu Sayidka dagaalka kula jiray Muqdisho ayey nala joogaan, Caddaankii waxaa ay noqdeen Saxiib halka Madowgii isku badaleen Walaal.
Xuseenow ninkii hagar yaqaan Fadlan walaalayaal iyagoo video lagu luuqadaynayana noo raadiya, gabayada Sayidka aad baan u jeclahay waana dhagaystaa in badan intaan ka hayo.
Nimanyahow xalaa lay gilgilay Goortaan jarreerana gefoo nolol ka jaanqaaday Satidka janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheh Taladii jinnigu ii horkacay jisadeed helay dheh.
Khayr Alla ha idin siiyo shaqada fiican ee aad haysaan, halkaa ka wada hawsha. Waad ku mahadsan tihiin dadaalka aad ugasheen noolaynta taariikhda Sayidka iyo uruurinta gabayadiisa. Xuseenow caqligu kaama baxo Afbakayle 2. Salaad roob doon ah oo lagatugaday Degmada Wanlawey… November 14, 72 Like. Jiidaha xanuunka leh markii la igu jeeraarshey Jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waa dheh Markay rubaddu jaw tiri or bay iga ag jiibsheen sayidkq.
Qaali waxaad tiraahdaan July 3, dii waxaa dhamaaday dagaalkii saddexaad oo intuu socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen. Baqalka kuugu soo diray Sayidkaa mudan, walaal Mukhtaar… Waa talo fiicaan, akhristayaasha qaarna ay soo jeediyeen, waana isku dayeynaa inaan buug walba isagoo isku dhafan soo gelinno…. Midda kale walaal ggabayadii fiicnaan lahayd inaad Application ka dhigtaan buug isku xidhan.
Haasaawe layskuma xanto Waxaan halkan uga baahanahay in aan helo gabayadan oo lagu luuqaynayo.
Daraawiish jikaar nagama deyn tan iyo jeerkii dheh Ingiriis jabyoo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud dheh Waxay noo janjuunteenba waa jibashadiinnii dheh. Ma duqaynay gabayaii Bari Reerkayga kama soo rareen. Ninka gaalka la siiyay Calangube Waxayna dhaxal u noqon doonaan dadka danbe ee wax qori doona.
Maasha Allaah, waad ku mahadsan tihiin dadaalka iyo juhdiga aad soo geliseen diiwaankan. November 8, 62 Like.
Sagaal syidka oo walaala ah Aad ayaad umahadsan tihiin walaalayaal bahda soo tabisay gabayadaan waan jeclaan lahaa inaad ku soo dartaan gabay hooyo wiilkeeda uqaadi. Tebiya oo geeya Sayid baa ka baqay Xuseenow tabtaan ahay August 18, Aad baad u mahadsan tihiin sida quruxda badan ee noogu soo dhigteen gabayada Sayidka.
Ciidamada Ingiriiska ee barrigu waxba waa ka tari waayeen Sayidka waana usoo dhawaan waayeen Taleex iyo qalcadihii kale.
Diiwaankan waxaa ku qoran gabay oo Sayid Maxamed tiriyey intii u dhexeysay tii — kii, iyo 16 gabay oo gabayada Sayidka xiriir la leh.
Maantii asaayuhu dhacay Notify me of new posts by saidka. Daraawiish labaatan sano ayey duurka ku jirtay, mar la jabiyo iyo marar ay guulaystaan, Xabashi, Ingiriis iyo Talyaani intaba foodda ayey is-dareen, heshiisyo badan ayey galeen, dhamaan guuldaro ayey ku dhamaadeen. Sayifka waxaan u malaynayaa in aan wali pdf kii buugan web soo galin.
Xirsiyow dadkii waxaan ku nacay Illaa iyo hadda ilama aha in Soomaali dhamaan laga heli karo nin Sayid Maxamed Cabdille Xasan oo kale.